Monday Blues တွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ? · MyWorld
Monday Blues တွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ?
20 Jun 00:00 by Yunn Kyi Pyar
ရုံးပြန်တက်ရမယ့် တနင်္လာနေ့မနက်တွေဆို တော်တော်နဲ့ အိပ်ယာကမထချင်ကြတာမျိုး၊ ရုံးပိတ်ရက်တွေကမြန်လိုက်တာဆိုတာမျိုး၊ ရုံးသွားဖို့ကိုစိတ်မပါလိုက်တာ ဆိုတဲ့ Monday Blues တွေ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ရုံးစရောက်ရောက်ချင်းမနက်ကနေ ညနေရုံးဆင်းတဲ့အချိန်ထိ Energy အပြည့်နဲ့ ဖြစ်နေဖို့ အောက်ကအချက်လေးတွေ လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
TGIF/TGIS တွေပြီးသွားပြီးတဲ့နောက် တနင်္ဂနွေညမှာတော့ တတ်နိုင်သလောက် စောစောအိပ်ယာဝင်ပါ။
စောစောထရပေမဲ့ အိပ်ရေးဝဝနဲ့ နှိုးလာရတဲ့အတွက် ခေါင်းနောက်တာ ခေါင်းကိုက်တာတွေကြေညင့် စိတ်မကြည်တာကိုပါ ရှောင်ရှားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေညမှာတည်းက မနက်ဝတ်မယ့်အဝတ်အစားကို ကြိုထုတ်ထားပါ။
မနက်ရောက်လို့ မထချင်လို့ အိပ်ယာထဲမှာ အချိန်ဆွဲနေတာနဲ့ အဝတ်အစားရွေးနေလို့်ဆိုတာတွေပါင်းပြီး ရုံးနောက်ကျတယ်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ညဘက်ထဲက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ နေ့တိုင်းကြိုပြင်ထားနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး Outfit လေးကို တနင်္လာနေ့မှာဝတ်သွားတာမျိုးကလည်း ရုံးစသွားတာနဲ့ စိတ်ကိုတက်ကြွစေပြီး Positive Vibe ရအောင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
Positive Mindset လေးနဲ့တစ်နေ့တာကိုစတင်ပါ။
တနင်္လာနေ့ကစပြီး ရက်သတ္တပတ်လုံးကို “Attitude of Gratitude” ဆိုတဲ့ Mindset နဲ့ဖြတ်သန်းကြည့်လိုက်ပါ။ ရုံးကိုလာတဲ့လမ်းမှာ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေကို နားထောင်လာတာမျိုးက အလုပ်ခွင်ထဲမှာပါ စိတ်ကိုပျော်ရွင်တက်ကြွစေပြီး Monday Energy ကိုလည်းတက်လာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အလုပ်မှာ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေ၊ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့်၊ ပျော်ရွှင်စေနိုင်မယ့်အရာလေးတွေလုပ်ကြည့်ရင်း တစ်နေ့တာကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါသေးတယ်။
သုတေသနတွေအရ တနင်္လာနေ့ဆိုတာ Energy အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေမယ့် Motivation အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ရုံးစရောက်ရောက်ခြင်း ဘယ်နားကဘယ်လိုစလုပ်ရမှန်းမသိအောင် အလုပ်တွေအစီစဉ်တကျမရှိတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်မလား? အဲ့တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင် သောကြာနေ့ထဲက သတိရသလောက် Calendar မှာကြိုထည့်ထားတာမျိုး၊ Noteထဲမှာ လုပ်ရမှာတွေကို တန်းစီပြီးရေးထားတာမျိုးတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် Monday Schedule ကိုညှိထားသင့်ပါတယ်။
ရုံးဆင်းတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မုန့်ဆိုင်သွားစားပါ။
အလုပ်တွေပြီးလို့ ညနေရုံးဆင်းရင် ဘယ်ဆိုင်မှာဘာသွားစားမယ်ဆိုပြီး ကြိုတင် Plan လေးလုပ်ထားကြည့်ပါ။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို motivateလုပ်တာပေါ့နော်။ ရုံးဆင်းရင် ကိုယ်ကြိုက်တာလေး စားရတော့မယ်လို့တွေးတာနဲ့တင် အလုပ်လုပ်ရတာတတ်ကြွနေမှာပါပဲ။
7 days ago by Htet Naing Toe Oo
14 days ago by Hsu Pyae Hnin